Taariikhda hooyo Somaliyeed oo dibedda seexan jirtey Ingiriiska - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Taariikhda hooyo Somaliyeed oo dibedda seexan jirtey Ingiriiska
Waxa usbuucan magaalada London ee Ingiriiska ku geeriyootay hooyo Somaliyeed oo lagu magacaabi jirey Xaawo Cabdi oo seexan jirtey dariiqa qaasatan ka soo horjeedka maktabad u dhow masaajid. Hooyadan ayaa halkan timi markii laga soo saaray gurigii ay deganaayeen oo ay bixin kari wayday kirada.
Waxa dhowr mar loo qaaday isbitaalka kadib markii ay dhaxani ku dhifatey. Waxay diidey in la geeyo guri kale iyada iyo wiilkeeda, waxayna ka doorbideen inay seexdaan dariiqa. Qoyskeeda ayaa si kasta uga codsaday inay guri ka gasho dhaxamaha aadka u xun ee ka dhaca dalka wayse diiday dhmaantood.
”Marnaba ma bixin sababta ay ku diidey in dib loo meeleeyo ayay tiri Caasha Cabdi. Dawlada hoose ee xaafada ay ka deganayd dariiqa ayaa dhowr jeer ka tuurey kuraasta wadooyinka lagu fadhiisto oo ay ku fadhiisan jirtey.
Xaawa Cabdi iyo wiilkeeda Muxyadiin oo diidey inuu ka tago hooyadii ayaa dadka xaafadu aad u yaqaaneen. ”Hooyadan ayaa marka dadka Somalidu la hadlaan diidi jirtey kuna oran jirtey dantiina raaca. Waxay rabtey inay lagu celiyo gurigii uu ninkeedu ku dhintey laakiin dawlada hoose ma samayn karto waayo gurigaa dadkii lahaa ayaa la wareegay.
Xaawa Cabdi ayaa ugu dambeyn loola cararay isbitaalka oo aad ugu dhawaa markii uu naqasku ku dhegay, waxyar kadibna waxa la sheegay inay geeriyootay. ”Waxa ku dhacay hargabka Karoonaha laakiin kaasi maaha waxa ay u dhimatey Xaawa ayuu yiri qof u hadlay isbitaalka.
Afhayeen u hadlay dawlada hoose ee xaafada ay deganayd ayaa iyagu sheegay inay wax kasta isku dayeen sidii loo guri gayn lahaa hooyadan iyo wiilkeeda oo ay ku jirto in lagu celiyo gurigeedii hore ee ay la deganayd ninkeeda.
Geerida kadib ayaa waxa la sheegay in wiilkeedii la deganaa dariiqa uu ku soo noqday isla halkii uu hooyadii la deganaa.